भारु सटहीमा भारतको सिलिङः एक नेपालीको ४५ सय मात्रै साट्ने. – Sabaikoaawaj.com
भारु सटहीमा भारतको सिलिङः एक नेपालीको ४५ सय मात्रै साट्ने.
आइतवार, चैत्र १३, २०७३ 8:32:37 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौं,१३ चैत / भारतले नेपालीसँग रहेको एक हजार र ५ सय दरका ४५ सय नोट मात्रै साट्न सकिने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले भारतको यो भनाइमा असहमति जनाएपछि द्विपक्षीय बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ ।
बिदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भिष्मराज ढुङ्गानाले भने, ‘भारतीय टोलिले ४५ सयसम्म मात्रै साटिदिने बताएको छ तर हामीले २५ हजारसम्म साटिनुपर्ने अडान राखेका छौं ।’
आरबीआईको टोलिले सुनाएको निर्णयमा राष्ट्र बैंक प्रतिनिधिहरुले चित्त नबुझाएपछि बैठक निष्कर्षबिहीन बनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आरबीआईका प्रतिनिधीलाई भारतका उच्च अधिकारीहरुसँग कुराकानी गरेर साट्ने रकम बढाउन आग्रह गरेको छ ।
ढुङ्गानाले थपे, ‘हामीले उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेर यो सीमा बढाऊ भनेका छौं, त्यसैले आज बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन भोलि ९ बजे पुनः बैंठक बस्ने छ ।’
प्रकाशित मितिः आइतवार, चैत्र १३, २०७३ 8:32:37 PM